KABARIN-DRAMATOA LALAO RAVALOMANANA – MyDago.com aime Madagascar
KABARIN-DRAMATOA LALAO RAVALOMANANA	Amin’izao andron’ny 29 mey 2011 fankalazana ny Fetin’ny Reny eto amintsika izao dia raisiko ho fifaliana mitafotafo sady voninahitra lehibe ny miarahaba ny Reny malagasy rehetra tsy an-kanavaka nahatratra ity andro anio ity. Faly satria mbola samy velon’aina ary afaka mifampiarahaba na dia miaina ao anaty fahasahiranana lalina avokoa aza isika rehetra, na ny isam-batan’olona, na ny isa-tokantrano sy ny isam-pianakaviana, noho ny krizy mianjady amin’ny Firenena malagasy nandritra izay roa taona mahery izay.
Am-panetretena no anolorako izany arahaba izany satria miharihary loatra ny herim-po asehon’ny reny sy ny vehivavy malagasy tsy an-kanavaka, na antitra na tanora, na an-tanan-dehibe na any ambanivohitra, manerana ny faritra 22, miezaka hatrany mampandeha ny fiainana andavanandro sy ny fiainan-pirenena na dia iharan’ny mafy indrindra aza amin’izao krizy izao.
Ao anatin’ny tsy fisiana sy korontana ary tebiteby lava ny vahoaka amin’izao fotoana izao. Maro ny tsy an’asa, zara raha misy vola amidy sakafo sy iantohana ny ankizy ho any an-tsekoly, ao ny mandry fotsy na tsy mihinana raha tsy indray mandeha isan’andro ary mihamaro hatrany ny isan’ny zaza maty vokatry ny tsy fahampian-tsakafo sy ny hanoanana. Manoloana izany dia vao mainka mirotsaka an-tsehatra ny reny eo amin’ny asa aman-draharaha, na an-tsaha na an-tanàna, iadiana amin’izany fahasahiranana izany.
Mitombo hatrany koa ny isan’ ny tokantrano rava vokatry ny tsy fisian’ny vola miditra, eo ihany koa ny fisarahambazana, faharavàn’ny fifankatiavana sy ny fihavanana eo amin’ny mpivady, ny mpiray-tampo, ny zanaka sy ny ray aman-deny vokatry tsy fitovizan-kevitra ara-politika eo amin’ny Firenena. Mihamaro isa araka izany koa ireo reny sy tovovavy izay mizaka irery ny famelomana sy ny fanabeazana ny ankizy, miezaka mikolokolo sy manabe ny ankohonana sy ireo taranaka mba ho olom-banona, ary mitandro hatrany ny fifankatiavana sy ny fihavanana izay anisan’ny fototra lehibe iorenan’ny soatoavina malagasy.
Ny herin’ny fitiavan’ny Reny izay mateza, mahery sady manam-paharetana, no heverina hatramin’izao fa fara-tampony indrindra eo amin’ny karazam-pitiavana misy eo amin’ny olombelona. Ary ny tena maha zava-dehibe azy dia io no fototry ny fifankatiavan’ny mpiray tampo sy ny ankohonana, ny firaisankina ary ny fifanohanana, na am-pifaliana na an-karatsiana, eo amin’ny mpiray tanàna sy ny mpiara-monina ary ny firenena.
Sarotra sady mila herim-po sy faharetana ny fahitàna vaha-olana eo amin’ny fiainan’ny reny tsirairay avy ankehitriny noho ny toe-javatra manahirana eo amin’ny fiainam-pirenena.
Mihasarotra sy mihamitombo ny andraikiny; mpamelona ny tokantrano sy ny ankohonana, mpanabe sy mpanolokolo, mpampiray sy mpampihavana, indrindra ao anatin’izao fotoan-tsarotra izao; mpitady vahaolana eo no eo manoloana ny fiainana andavanandro, ary mpitady vahaolana maharitra mba isian’ny fivoaram-piainana sy fivoaran’ny toe-tsaina eo amin’ny rehetra ka ahafahan’ny firenena miroso ho amin’ny filaminana sy ny fampandrosoana maharitra amin’izay.
Izany sy izany ankehitriny no andraikitra efa sahanin’ny reny malagasy sady takiana aminy rahateo. Ary miorina amin’izany rehetra izany ny Hasina na ny fahamendrehana ekena fa ananany.
Ka hoy aho mamarana ity fiarahabàna sy fanandratana ary famporisihana antsika reny malagasy ity, raha mindrana ny tononkalon’ny andrarezina iray izay hitako fa mitaratra ny herim-po sy ny toetra ananan’ny Reny malagasy rehetra:
TSY KIVY Tsy kivy aho satria
Ny sotasota maro
Manakana ny dia
Dia mainka toy ny laro
Sy zezika hampaniry
Ny fikasako hikiry
Tsy kivy aho satria
Ny hery tato anatiko
Tsy osa na malia
Ny loza mifanesy.
(tononkalon’i RADO – Dinitra)
Koa sady mamerina ny fiarahabàna eram-po eran-tsaina ho antsika reny aho, no misaotra sy mankahery ary mitso-drano ahaleo ahalasana eo anatrehan’ny adidy sy andraikitra mankadiry sady sarotra iantsorohantsika .
Matokia fa momba antsika mandrakariva Andriamanitra.
Kabarin-dRamatoa Lalao Ravalomanana – Journée mondiale de la femme Andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy, afatry Ramatoa Lalao Ravalomanana Lalao madio no andrasana Auteur Solo Razafy*Publié le 29 mai 201129 mai 2011Catégories Politique	8 pensées sur “KABARIN-DRAMATOA LALAO RAVALOMANANA”	KintanaMananDrambo dit :	29 mai 2011 à 8 h 10 min	Dia faly miarahaba anareo RENY LEGALISTA rehetra, tratry ny Fetin’ny Reny indray ê ! Ny faniriana, dia mba any an-tanindrazana amin’izay ianao Ramatoa Lalao Ravalomanana, no mankalaza an’io fety io, amin’ny manaraka !
Bemafohy dit :	29 mai 2011 à 9 h 22 min	Ny tenanay koa dia faly miarahaba ny reny eran-tany indrindra fa ireo reny malagasy mitaky ny ara-dalàna anisan’izany ianao Ramatoa Lalao Ravalomanana.Ho tahian’Andriamanitra ianao sy ny ankohonanao.
HoAiza dit :	29 mai 2011 à 13 h 12 min	Faly miarahaba anao ihany koa, ary misaotra indrindra tompoko amin’ny tso-drano!
Ho fitsinjovana ny ho avin’ireo taranaka malagasy no anisany itolomanay hatramin’ny farany.
Raherisoa dit :	29 mai 2011 à 15 h 15 min	Manajanao tompoko,
Ny zavatra mba tiako ambara voalohany dia ny momban’ny ankizy mitsimpona fako sy mirenireny eny @ grande ville mangataka sy miasa miambina automobile ndry zareo mpanana mivoaka ny super marché sy ny sisa, TENA MAMPALAHELO NY MIJERY AZY IRENY IREO ZAZA IREO NO TOKONY HASIANA HEVITRA VOALOHANY ? SATRIA VAO ANY AN – KIBON’NY RENENY IZY IRENY DIA EFA FIJALIANA NO HIAINANY; VAO LATSAKA DIA EFA MOSARY. NY TIAKO HO LAZAINA DIA TOKONY TSY MAHAZO MITERAKA MARO NY VEHIVAVY MALAGASY, NY ANTONY DIA MITERAKA ZAZA HIJALY. ROA RAHA BE INDINDRA MBA AMPIHENA NY FAHANTRANA SY AHAFAHANA MAMELONA NY TARANAKA SY NY FANALEBEAZANA AZY. TOA LASA NY ZAZA INDRAY NO MAMELONA NY RAY AMAN – DRENY , ARY TENA MARO @ IZY IREO NO MIVAROTRA NY TENANY INDRINDRA NY ZAZAVAVY. OMEO TANY SY HAZO ARY MPANANBOTRA TRANO IREO VEHIVAVY MAMELONA NY ZANANY IRERY IREO MBA AHAFAHANY MANAVOTRA NY TENANY SY IREO ZANANY, AMPIANARO MAMBOLY MIOMPY ARY MIANATRA ASA TANANA. HESORINA AO ANDRENIVOHITRA AZA AFANGARARO NY OLONA TSY NAHITA FIANARANA SY TENA EFA RESY FA TSY HIVOATRA, HISIO OLONA NIANATRA AFAKA ANORO SY HANARINA IREO IZAY TENA EFA OSA ( GASY MIFANAJA FA TSY MIFANITSAKA ) amin’ny maraka indray ny momban’ny be Antitra Mangataka sy tsy misy trano sy sakafo. Tsy mandidy aho fa totro hevitra é misaotra tompoko.
HoAiza dit :	29 mai 2011 à 16 h 18 min	Efa tanteraka ireo zavatra voambaranao ireo,
raha mbola ingahy Marc Ravalomanana no nitantana ny firenena.
Njara dit :	29 mai 2011 à 18 h 45 min	Na dia somary tara kely aza, aleo hono tara toy izay tsymisy mihitsy, ka dia miaraka amin’ny Legalista rehetra namana ny tenako , manomboka amin’ny
Vadin’i SEM Ravalomanana ka hatramin’ny Reny rehetra !
Ho lava-andro iainana ary omen’Atra Fahasalamana sy Fahombiazana amin’ny zavtra rehetra irianareo tanahina ho taranaka amam-para !
Soava Tsarà Tompokovavy isany !
Ziry Onésime dit :	30 mai 2011 à 0 h 05 min	Faly miarahaba anao tokoa ny tenanay, Rtoa Lalao RAVALOMANANA, izay tena Renin’ny Malagasy rehetra!.. Tsy manana Reny lehibe toa anao izahay, ka mahatsiaro ho kamboty tokoa rehefa tsy eo ianao!
Mahatoky an’Andriamanitra anefa izahay Tompoko fa tsy maintsy hiverina ianao!
mi dit :	30 mai 2011 à 6 h 16 min	Miarahaba anao Mme LAlao
HAfa ihany rehefa ny olona manana ny maha izy azy no manao fanmbarana na firariantsoa.
Mankahery anareo mivady
Précédent Article précédent : Madagascar n’a nul besoin d’aide étrangère selon RajoelinaSuivant Article suivant : Rodoben’ny vehivavy tetsy Ambatomena !26 mai 11
Les meilleurs Articles	MITANTARA NY HABIBIANA NATAON-DRY LYLSON TANY ATSIMO I D'GARY	Mitady ny very ny Malagasy !	Mme Voahirana anabavin’i Andry Rajoelina no mpanondrana Bois de Rose	MyDago.com aime Madagascar